Thwebula Pokemon GO 0.37.1 – Vessoft
Thwebula Pokemon GO
Pokemon GO – umdlalo othandwayo nge geolocation ezengeziwe engokoqobo technology. Umsebenzi oyinhloko umdlali ukubamba izidalwa ezicatshangelwayo esibizwa Pokemon. Ukuze uthole kubo udinga ukuhamba emhlabeni wangempela. Pokemon GO inebalazwe esakhelwe in ukuhlola izindawo engaziwa futhi bahambe emigwaqweni yedolobha in search of Pokemon kufihlwe. In the inqubo yokuthola izidalwa, umdlali angathola amabhonasi ehlukahlukene kanye nezingibe for Pokemon. Futhi in the Pokemon GO kukhona ikhono Duel nabanye abadlali sibambe iqhaza ukulwa omkhulu phakathi kwalamaqembu.
Ukufuna Ukwazi izidalwa ezicatshangelwayo endaweni yangempela
Iqoqo elikhulu Pokemon
Ukuqeqeshwa kanye kwemvelo nezidalwa
Ukulwa emelene nezinye abadlali
Amazwana on Pokemon GO:
Pokemon GO Ahlobene software:
Imidlalo Isicelo Elula wenkampani Valve ukulandelela сloseouts game. Isofthiwe ikuvumela ukuba lokhozi lokho imidlalo abangani bakho badlala uxoxe nabo izingosi zengevu.
Imidlalo Umdlalo for speed drive and sinqobe izithiyo ehlukahlukene in 3D track. Umdlalo isebenzisa imiphumela agqamile omuhle 3D.
Emulators The Emulator okuphelele Sony PlayStation umdlalo console okwazi ukudlala imidlalo ethandwa phezu Amadivayisi Android.
English, Українська, Français, Español... Swamp Attack 2.0
Imidlalo Umdlalo Arcade ukuvikela indlu ka umdlali ngokumelene ukuhlasela izilwane crazy. Umdlalo ine izindlela eziningi ukuvikela indlu ngokumelene nezilwane enezici ezihlukene kanye namakhono.
Imidlalo Umdlalo Arcade ne-Gameplay ezithakazelisayo kulowo mncintiswano inthanethi nabanye abadlali. In the game zikhona ezahlukene tricks wezindlela kanye amabhonasi ekhethekile ukwehlukahluka okukhona Gameplay.
Imidlalo The online board game lapho kusekelwe-based baphendukela ukulwa omunye phakathi kwabantu ababili izimbangi. Lo mdlalo inikeza okuningi uhamba amasu kanye nohlelo athole imiphumela emihle.
Imidlalo Umdlalo Arcade ne izindaba ezivusa amadlingozi futhi imiphumela funny audio. In the game kukhona amazinga amaningi kanye okwandayo yinkimbinkimbi futhi abalingiswa ezahlukene amakhono ezikhethekile.
English, Українська, Français, Español... VirCities 3.1
Imidlalo Kumele kuqhanyukwe nesu game yezinhlobo Simulator ukuphila. Umdlalo Injongo eyinhloko ukuze bazivulele indlela eya lakho siqu umgomo wayefisa ngazo zonke izindlela ezitholakalayo.
English, Français, Deutsch, Русский... Pou 1.4.73
English, Français, Español, Deutsch... Camfrog 5.2.5231
Ewebhu The popular yevidiyo ukuxhumana abasebenzisi emhlabeni jikelele. Isofthiwe ikuvumela ukuba uhlale kanyekanye nabo ezingosini zengevu eziningana futhi ukuxhumana in mode of the yenkomfa yevidiyo.
Youtube Ithuluzi ukubukela ividiyo on the service popular YouTube. Isofthiwe kwenza ukubuka ividiyo e izinga okusezingeni ngokusekelwa of engezansi.
Inethiwekhi Yokuxhumana Isicelo free ukusebenzisa inethiwekhi ethandwayo emphakathini. Isofthiwe kwenza ukuxoxa nabangani, buka okuqukethwe kwabezindaba amafayela exchange.
Internet Ukubethelwa Isofthiwe omuhle ukuxazulula inkinga lokufinyelela avinjiwe. Isofthiwe ikhetha esifundeni uxhumano elikhulu.
English, Français, Español, 中文... Bona software xaxa